Kuzvipira kweMcCain Chikafu Kunobatsira Kugonesa Kupisa Kwenyika Kusvika 1.5 ° C - Potatoes News
Kuzvipira kweMcCain Chikafu kunobatsira Kuderedza Kupisa Kwenyika kusvika pa 1.5 ° C
Kuzvipira kwaMcCain Foods kutema nehafu gasi inokanganisa gasi pamhepo pamabasa ayo epasirese pakupera kwegumi ramakore kwakasimbiswa kuenderana nekuedza kudzikisira kudziya kwepasi kusvika pa1.5 ° C.
Inoenderana neGlobal Sustainability Strategy uye chivimbiso chekugadzira chikafu chinogamuchirwa nenyika, McCain Foods yakazvipira kuburitsa gwaro rayo rekutanga rekusimudzira gore rapfuura.
Nekuvhurwa kweMcCain Foods 2020 Global Sustainability Report Summary svondo rino, yakazivisa kuti hurongwa hwayo hwekudzikisa marara uye zvibodzwa zvakatenderwa nesainiro yeSainzi Inotarisirwa, ichienderana nesainzi yemamiriro ekunze uye zvinangwa zvechibvumirano cheParis Chibvumirano. chengetedza kudziya kwepasirese kusvika 1.5 ° C.
McCain ndiyo yega kambani yezvinwiwa uye chinwiwa muCanada - uye imwe chete makumi matatu nematatu pasi rose - inovhenekerwa neSainzi Yakavakirwa Target nekuzvipira kudzikisa kuburitsa kwayo kusvika padanho iri.
"Nekuita kuti zvinangwa zvedu zvionekwe sesainzi, McCain ari kuona kuti zviito zvedu zvichabatsira zvakanyanya mukuedza kugadzirisa kushanduka kwemamiriro ekunze," anodaro Max Koeune, Mutungamiri uye Chief Executive Officer weMcCain.
“Kana tichiti tiri kudzikisira kabhoni ne50%, ndiko kuita kwedu kwakakwana. Carbon offsets haigone kushandiswa neSainzi-Yakavakirwa Maturu danho. Uku kuzvipira kwakasimba, kwakasimba kuenda kunotora kabhoni. ”
McCain's 2020 Global Sustainability Report Pfupiso, Pamwechete, Towards Planet-Shamwari Chikafu, inosimbisa nhevedzano yezvipikirwa uye zvirongwa zvinobatsira kambani kuzadzisa zvayakaburitsa. Kuzvipira kwekambani yekumisikidza maitiro ekurima patsva pa100% yemapatata acreage kunobatsira kucheka emhepo inoenderana nekurima ne25%.
Chimwe chiitiko chakakosha ipurazi rezuva uye biogas digester McCain iri kuvaka panzvimbo yayo yekugadzira muBallarat, Australia. Yakagadzirirwa kushanda zvizere gore rinouya, ichaburitsa 39% kudzikiswa kwesimba kubva kune gridhi, uye kudzora kabhoni kuburitsa nemakumi maviri nematanhatu matani pagore.
Zvimwe zvirongwa zvekudzora kabhoni zvakarongwa kana kuitwa zviri kusanganisira:
Kufamba kuenda ku100% magetsi anovandudzwa na2030.
Kuvaka chinowedzerwazve chizvarwa chinzvimbo munzvimbo yayo yekugadzirisa zvirimwa.
Kugumisa kushandiswa kwemarasha mune ese mashandiro, kusanganisira China uko chikamu chazvino kubuda chinoderedza McCain kuburitsa kabhoni kwegore nemakumi maviri nematanhatu ematani pagore.
Kuenderera mberi kudzikisira kuvimba nefossil fuels kuburikidza nemagetsi uye mamwe mafuta.
Kuenderera mberi nekufambisa simba rekugadzirisa magetsi munzvimbo dzayo dzese
Kuona 100% yekupakata ichazogadziriswazve, kugadziriswazve, kana manyowa muna2025
Tags: McCain Chikafu
Kuwedzera kugona kwekugadzira neyakajeka state-of-the-art french fry chirimwa muKruiningen - iyo Netherlands
Kushandisa hunhu hweColorado mbatatisi maitiro echisikigo ndiyo nzira yakanakisa yekuiwana idiki
Kuderera kwemweya uye kuderedzwa kwemafuta emagetsi: enjini nyowani mafomu ekunze-mugwagwa maficha anosanganisa mashandiro pamwe nekudzivirira kwemamiriro ekunze
Kudzora mumiriri wespider mite muzvirimwa zvembatatisi (bio alternatives)
Chii chinonzi biostimulant chinoita mumuti?
"Mbatatisi ine magnesium, chikafu chedu chikuru"
Agricultural Equipment Mugadziri Grimme yakavhura chirimwa chayo chitsva muChina
Kutyaira uchienderera mberi uine shanduko - kutenderera kana lever